स्थानीयले उछिन्यो संघीय सरकारलाई, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण | EduKhabar
स्थानीयले उछिन्यो संघीय सरकारलाई, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण
पाल्पा - शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकार सक्षम छैनन् भन्ने आलोचना भईरहेका बेला शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई उछिनेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विभिन्न ५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिएको हो ।
विभिन्न ब्यक्तिहरु मिलेर शुरु गरेको तरकारी खेतिका लागि स्नातक उत्तिर्ण प्रेम बगालेको प्रमाणपत्र राखेर पालिकाले ४ लाख रुपैंया ऋण दिएको हो । उनीहरुको समूहले पोखराथोकमा तरकारी खेती गर्दै आएको छ ।
यस्तै श्रीमान् श्रीमती भगवान र दुर्गा गैह्रेलाई लेयर्स कुखुरा तथा माछा पालनका लागि रु. १ लाख ऋण दिएको पालिकाले जनाएको छ । उनीहरुले श्रीमान्को स्नातकोत्तर र श्रीमतीको स्नातक उत्तिर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिएका हुन् ।
यसैगरी तरकारी खेति गर्न सकिना अधिकारीले आफ्नो स्नातक उत्तिर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर रु. १ लाख ऋण लिएकी छन् भने, बाख्रा पालन गर्न हरी बस्यालले आफ्नो स्नातकोत्तर उत्तिर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर रु. १ लाख रुपैंया ऋण लिएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि तय भएको कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो चरणमा सात लाख रुपैंया लगानी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए । सीप र जाँगर भएका तर सानो पूजिँ नभएर काम गर्न नपाएका युवालाई लक्षित गरी शुरु गरिएको यो कार्यक्रमको प्रभावका आधारमा थप विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको उनको भनाई छ ।
'नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको संरचना बदलियो, सिंहदरवार गाउँ गाउँ पुग्यो भनियो, तर, उद्योग धन्दा छैन, कलकारखाना छैन, काम नपाएर युवाहरु बरालिरहेका छन्, त्यसैले सानै भए पनि किन शुरु नगर्ने भनेर हामीले यो काम शुरु गरेका हौं' उनले भने, 'यति धेरै पढिएको छ तर काम छैन भन्ने युवालाई लक्षित गरि उनीहरुले नै पढेको कुरालाई केन्द्रमा राखेर त्यही सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण दिन थालेका हौं ।'
यसरी ऋण पाएका युवाले २ बर्ष भित्र फिर्ता गरेमा ५ प्रतिशत रकम छुट दिने पनि बस्यालले जानकारी दिए । उक्त ऋण लिएपछि तीन महिना भित्र काम शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।